प्रदेश सरकार हाम्रो पसिनाको उपहास नगर – Sourya Online
जीवन्ती पाैडेल २०७७ जेठ २२ गते ८:१६ मा प्रकाशित
जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताका साझा अभिभावाक हुन भन्ने गरिमा बोकेको तीन तहको सरकार समग्र विकासको जिम्मेवारी बोकेर सस्थांगत रुपमा अगाडि बढी रहेकै बेला अकल्पनिय प्रकोपको सामना गर्न बाध्य छ यति बेला । यो अवस्थामा सबैको चित्त बुझाएर काम गर्ने वातावरण त छैन । तर, पनि भएको स्रोत साधन परिचालन गरी धेरै भन्दा धेरै जनतालाई अभिभावक छ हाम्रो भन्नी अनुभूति दिन सक्नु पर्ने समय पनि हो यो । औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका नेताहरुले आफ्ना सहयोगीहरु पहिचान गरी परिचालन गर्न आफ्नो कला पर्दर्शन गर्नु पर्ने समय हो यो ।
तर, पार्टी निर्माणका लागि कुनै पनि त्याग दुःख नै नगरी नेताको चाकडी, पैसा र गुन्डागर्दीको आडमा प्राप्त गरेको पद प्रतिष्ठा जोगाउन मात्रै पनि पार्टी निर्माणमा अनबरत आफ्नो जीवन समर्पण गरेका पाका पुराना कार्यकर्ताहरु सँग सहयोग लिन अहंकारले घर्लम्मै ढाकेको मानसिकतालाई सहज पक्कै पनि छैन । विशेष गरी सुदुरपश्चिममा यो अवस्था बढी देखिएकोले जनता धेरै समस्यामा छन् । सुदुरपश्चिमको रोजगारी भारतका विभिन्न शहरहरुमा निर्भर रहदै आएको छ । त्यसै पनि गरिबी र पछौटेपनका कारण बिकराल समस्यामा रुमल्लिएको सुदुरपश्चिममा गलत राजनैतिक प्रबृतिले झन् समस्या बल्झाइरहेको छ ।
सुदुरपश्चिमका अनेक समस्याहरु छन्, तीमध्ये देशका विभिन्न जिल्लाबाट बसार्इँ सरी आउनेहरुको अधिकांश बस्तीहरुमा जाती, वर्ग र ठाउँ बिषेशका आधारमा मानसिक रुपमा बिभाजनको रंग प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत चाकडी नगर्दा जिन्दगी भरी दुःख गरेका कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्दिन सक्नेसम्मको अवस्था छ । नेतृत्वले अबसरको बाडफाँडमा पनि नितान्त आफ्नो राजनैतिक हैकम बचाउन केन्द्रीत रहि खल्तीबाट अबसर बितरण गर्ने गरेका दृष्टान्तहरु पनि कार्यकर्ताको भोगाइ र अनुभव रहेको छ ।
जसरी पनि नेतृत्वमा टिकिरहनु पर्ने मानसिकताले गलत र काम नगरी पद हत्याउने भरौटेको काँधमा जिम्मेवारी दिदाँ अनेकन आन्दोलनबाट स्थापित भएका सम्भावित नेतृत्वको सृजनशिलताको हत्या भएको छ । यसले काम गर्ने र इमान्दार नेता कार्यकर्ताको मनोवल घटाउने काम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरु तै चुप मै चुपको नीति अबलम्बन गरी टुलु टुलु हेर्नू सिवाय अर्को बिकल्प देख्दैनन । देश र जनताको सेवा गर्छु भनी सहिदको रगतले सिन्चित लाल झन्डा सामु उभिएर हामी कार्यकर्ताहरुले पनि देश र जनताको सेवा गर्छौ भनी कसम त खाकै हौ । जनतासँग खाएको कसम पूरा गर्न नसक्दा अहिले त्यही कसमले भतभती पोलिरहेको छ हामीलाई ।
यति बेला भारतका विभिन्न शहरमा रहेका नेपाली सबैभन्दा धेरै पश्चिमी नाका बाटनेपाल प्रवेश गरेका छन् । ती मध्ये सबै जसो सुदुरपश्चिका छन् । उनीले नेपाल आए पछि सुरक्षीत महसुस गर्न पाउनु पर्छ । तर, उनीहरु खान नपाएको, क्वारेन्टाइनको नाममा एकै ठाउँ धेरै जना थुप्रिएर बस्नु परेको र खानसम्म नपाएका जस्ता गुनासो सुनिएको छ । जनताको सरकासँग जनताले खोजेको आधार भूत आवश्यकता पाउनु पर्छ । उनीहरुले पाउनु पर्ने स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकारको कमजोरी गरिनु हुँदैन । क्वारेन्टाइमा राखिएपछि गर्नु पर्ने सबै प्रकारको उपचार र सेवा सुविधा दिइयोस । यसो गर्दा हामीले सरकार प्रति गौरवको अनुभू ितगर्ने छौँ भने जनताले सरकार आफ्नो भएको ठान्ने छन् । जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँमा बसे पछि सबै कुराको जवाफदेही बन्नुपर्छ मौनता साँधेर वा केही छैन भनेर उम्कन पाँदैन । भोली हामी जाने त्यही जनाका बीचमा हो । यो कुरा हामी कसैले भूल्न हुँदैन ।
यति बेला विश्व कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ । हामी घर भित्र बन्दी जस्तै छौ । स्ववीवेकको सेवा बाहेक जनताका पक्षमा काम गर्ने कुनै जिम्मेवारी छैन । जनतालाई यो भन्दा दुखको क्षण कहिले आउँछ होला र ? नआयोस पनी । हामीले रात दिन जनताकै सेवा गर्न समाजमा रहेको लैङ्गिक, जातीय, वर्गाीय एंव ठाउँ र भूगोलका आधारमा गरिने विभेद समाप्त पार्न राजनीतिक कामामा आफ्नो मानो खाएर बनाएको पार्टी हो यो । पार्टीले यति बेला तिनै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सुदुरपश्चिममा भएका केही समाचारहरु सुन्दा लज्जा बोध भएको छ ।
जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्ने, चुनौतिको सामना गर्न हिच्किचाउने स्वभाव भएका जनप्रतिनिधिहरु लाचार बनी सत्ता मोहमा लिप्त नहुनुस् । जनताले तिरेको करमा मोज गरेर भुँडी पल्टाउदै जनताका समस्यासँग बेखबर जस्तो भइ एसीमा बस्न र चिल्ला गाडी हुइँक्याउन लाज लाग्दैन ? प्रदेशमा जे जति स्रोत साधन छ त्यसैले जनताको पक्षमा उभिनु पर्दैन ? कोरोनाको माहाकारी भएको बेला अस्पतालमा आइसोलेसन पुगेन भने सबै भन्दा पहिला मन्त्री निवासलाई नै आइसोलेसन बनाउनु पर्छ । जनता उपचार नपाउने नेता मन्त्री आलीसान भवनमा कीन बस्ने ? मन्त्रीले चड्ने गाडीलाई संक्रमितको लागि एम्बुलेन्स बनाउनु पर्छ ।
फेरी पनि आग्रह छ, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार हाम्रो पसिनाको उपहास नगर । बच्चा भोकले रुँदै गर्दा तीनका बाबु आमासँग भोग मेटाउने केही छैन, म जनतालाइ खान लाउन दिन सक्दिन भनेर उम्कन कदापी पाइँदैन । ज्याला मजदुरी गरेर हुन्छ वा ऋृण सापटी गरेर भए पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर । जनताले त्यसैका लागि हो भोट दिएर जीताएका हामीले त्यो भूल्न हुँदैन । अन्य भौतिक बिकास रोकेर भए पनि सुदुरपश्चिमेली जनताको आधारभुत मानव अधिकारको सम्मान गर । अवस्था सजिलो पक्कै छैन् । तर पनि जनता प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न केही त गर ।
बेसार र मेरी आमा
माधव नेपालसँग भेटिन् चिनियाँ राजदूतले
मेलम्चीको पानी सुरुङमा
‘ढलबाट मानिसमा कोरोना सर्दैन’
कांग्रेस बैठकमा घुस्यो नेकपा विवाद